OwaseMbali nendondo kazwelonke | News24
OwaseMbali nendondo kazwelonke
ISITHOMBE: sithunyelweUNkk Ntokozo Mbuli benoMlungisi Ntuli ngemuva kokuhlabana ngendondo ngoLwesibili.
USOSAYENSI waseMbali Unit 2 uMnuz Mlungisi Ntuli uthi namanje akakholwa kuthi akakhale njengoba ehlabane ngezindondo ezimbili esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili.
UMnuz Ntuli nogxile kakhulu kwezemvelo kanye nokufundisa intsha yaseMgungundlovu ngeMvelo uhlabane ngendondo ye-Wetland Education and Clean Development Award emcimbini wezindondo zikazwelonke waminyaka obizwa ngokuthi i-Natioal Wetland Indaba nobowubanjelwe e-Kimberly ngesonto eledlule.
Uphinde wahlomula ngenye indondo futhi ngoLwesibili mhla zingama-23 kuMfumfu( October) i-Environmental Media and Environmentalist of the Year Award emcimbini wezindondo owaziwa ngokuthi i-The Macqubu Ntombela and Ian Player Cub Awards nobubanjelwe eGoli.
Ekhuluma ne-Echo uMnuz Ntuli uthe ujabulile kakhulu kanti futhi usathukile ngokuthola lezi zindondo.
“Kumina ukuqokwa nje kuphela bekusho lukhulu kodwa ngoba ngigcine ngiwinile ngiyajabula kakhulu. Lokhu kuyakhombisa ukuthi uma ngabe uzimisele futhi usebenza kanzima uyakwazi ukuphumelela.
Bekungekho lula kona ngesikhathi ngisaqala kodwa ngabekezela ngenxa yothando enginalo lwemvelo kanye nolokufundisa intsha yethu ngazo ezemvelo. Ngijabulile kakhulu ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibeke indawo kanye nedolobha lethu ezingeni elikhulu kangaka,” kubeka yena.
Uthe lolu hlelo lwakhe waluqala ngonyaka wezi-2015 endaweni yaseMbali nalapho abamba khona umgubho wokuqala owaziwa ngokuthi i-Wetlands Day nokungumgubho womhlaba wonke oba njalo ngonyaka ngomhlaka-2 kuNhlolanja (February). Uthe ngemuva kwaloku wabe esesebenzisana nenxanxathela yezitolo i-Greater Edendale Mall kwaze kwaba luyakhula lolu hlelo baze bavela ngisho kumabonakude.
Uphinde waveza ukuthi kumanje usezoba matasa njengoba esezoqala ukulungiselela umgubho wonyaka ozayo.